Dhalinyaro ka qalinjebisay dugsiyada sare iyo Jaamacadaha oo ku biirey ciidamada Booliska (Sawiro) | Sagal Radio Services
Dhalinyaro ka qalinjebisay dugsiyada sare iyo Jaamacadaha oo ku biirey ciidamada Booliska (Sawiro)
Dhalinyaro ka soo qalinjebisay dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka ayaa bilaabay inay ku biiraan ciidamada Booliska Soomaaliyeed iyadoo boqolaal dhalinyaro ah haatan ay tababaro ku qaadanayaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba.
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu yahay ciidankii ugu horeeyay ee dalka Soomaaliya laga aasaaso isagoo soo maray heerar kala duwan.
Saraakiishii iyo ciidamadii hore ee tababarada Booliska lahaa ayaa noqday intooda badan kuwo howlgab ah, hase ahaatee waxaa haatan la bilaabay in dib u dhis loo sameeyo ciidamada Booliska waxaana tababaro kala duwan la siiyay dhalinyaro ka soo qalinjebisay dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka.
Dhalinyaradan ayaa waxaa ay yihiin qaar loo tababarayo saraakiil iyo saraakiil xigeeno waxaana la qorsheynayaa in loogaga maarmo ciidamadii howlgabka noqday soddonkii sano ee la soo dhaafay.
Ardayda ka soo qalinjebisay jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayay fursad u noqotay inay helaan shaqo ay noloshooda ku maareyn karaan iyadoo ciidamada Booliskana ay taakuleyn ka helaan Hay’adaha qaramada Midoobay.
Tags Arday biirtay Booliska ku